त्यसको भिडियो क्लिप टिकटकमा भाइरल बनेको छ ।
काठमाडौं । टेलिभिजन कार्यक्रममा एक प्रस्तोताले आफूमाथि असभ्य टिप्पणी गरेको भन्दै नायिका पूजा शर्माले आक्रोश पोखेकी छन् । फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले ‘दारा निस्केको महानायिका’ भनेर आफ्नो मानहानी गरिएको बताएकी छन् ।
चलचित्र पत्रकार प्रकाश सुवेदीले आफ्नो एक टेलिभिजन कार्यक्रममा पूजामाथि लक्षित गर्दै छुद्र टिप्पणी गरेका थिए । त्यसको भिडियो क्लिप टिकटकमा भाइरल बनेको छ । धेरैले पत्रकार सुवेदीको आलोचना गरिरहेका छन् ।
राष्ट्रिय टेलिभिजनबाट सुवेदीले बोलेका शब्दहरु यस्ता थिए– ‘इन्टरभ्यू दिने पनि आफैं, बोल्ने पनि आफैं, नआउने पनि आफैंलाई, अनि हामी चैं काटिदिनुपर्ने, त्यो पनि मिलाइमिलाइ… महानायिका बनाइदिनुपर्ने… त्या पनि दारा निस्केको अनुहारलाई… कति हाँस्नु… ।’
यसरी नायिकाको अनुहारलाई लिएर मजाक गरेपछि सुवेदी आलोचनामा परेका हुन् । सुवेदीले नायिकाको नाम नलिए पनि उनको टिप्पणी पूजाप्रति लक्षित रहेको बुझ्न कठिन छैन । केही समयअघि उनले नै पूजाको एउटा अन्तरवार्ता लिएका थिए, जुन सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो । नेपालमा कतिवटा जिल्ला र प्रदेश छन् भन्ने प्रश्नको पूजाले सही जवाफ दिन सकेकी थिइन् ।
पूजाको कमजोर सामान्य ज्ञानलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा निकै ट्रोलहरु बनेका थिए । यसमा पूजाले आफ्नो कमजोरी स्वीकार्दै माफीसमेत मागिसकेकी छन् । आफूले अन्तरवार्ताको सो अंश सम्पादन नगर्न आग्रह गर्दा सुवेदीले नमानेको पूजाको भनाइ छ । उनले लेखेकी छन्, ‘अन्तरवार्तामा बोलाइयो, गएँ । सामान्य ज्ञानसँग सम्वन्धित प्रश्न सोधियो । इन्टरभ्यू चल्दाचल्दै मैले उहाँलाई मैले राम्रो गर्न सकिनँ, प्लिज यो काटिदिनुस् भनेँ । तर, मान्नुभएन ।’
उक्त घटना भर्खरै सेलाएको बेला सुवेदीले फेरि आफूलाई अन्तरवार्ताका लागि बोलाएको पूजाले बताएकी छन् । उनले लेखेकी छन्, ‘प्रकाशजीले फेरि मलाई इन्टरभ्यूमा आऊ पूजा भनेर भन्नुभो । म मानसिक तनाव झेलिरहेको थिएँ । अब फेरि पुरानो गल्ति कसरी गर्न सक्थेँ ? म त्रसित पनि थिएँ । त्यसैले मैले सरी दाई म आउन सक्दिनँ भनेँ ।’
‘तर, त्यसपछि उहाँले आफ्नो कार्यक्रममा मलाई लक्षित गरेर ‘दारा निस्केको महानायिका भनेर शारीरिक हाउभाउलाई लक्षित गरेर अत्यन्त क्षुब्ध ढंगले प्रस्तुत गरेर मेरो मानहानी गर्न कुनै कसुर छोड्नुभएन ।’
उनी अगाडि लेख्छिन्, ‘के पत्रकारले यस्तो अशिष्ट, अभद्र र अमर्यादित शब्द प्रयोग गर्न मिल्छ ? पत्रकारले गर्न सक्ला मानौं, के टेलिभिजनमा यस्ता असभ्य कुराहरु सम्पादन गर्ने कुनै निकाय छैन ? हरेक ट्रोलको शिकारदेखि यस्तो अभद्र व्यवहारप्रति हामी कलाकार सधैं मौन नै रहनुपर्ने ? अहिले आएर उहाँले मैले कसैको नाम तोकेको छैन भनेर पन्छिन मिल्छ ? यो ढंगको प्रस्तुतीकरणले के पत्रकारिताको इज्जत बढ्छ ?’
रोजेनले तोडिन ‘गंगनम स्टाइल’को रेकर्ड,२४ घण्टामै ४१.६ मिलियन दर्शक...
‘डिसेम्बर फल्स’ २०७८ साउन १ गतेलाई प्रदर्शनमा आउने...
निर्माता तथा निर्देशक अशोक शर्मा कोरोना संक्रमित...
मह जोडीलाई पुरस्कार हस्तान्तरण...
संचारकर्मी प्रकाश सुवेदीप्रति लक्षित गर्दै नायिका करिश्माको यस्तो टिप्पणी...
पूजा शर्मा र पल शाह म्यूजिक भिडियोमा एकसाथ देखिने...
आँचललाई बिहेपछि झनै सुन्दर देखिएको फ्यानहरुको प्रतिक्रिया...
दिपकराजलाई कसले भन्यो ‘महानायक’ ?...